Atao mandeha | Zeevou
Zeevou no fomba tsara indrindra hanodinana ny fitantanana fandraisam-bahiny. Alefaso fotsiny amin'ny tranokalanay ny fanananao, apetraho ny tahan'ny, ary tsara handeha ianao!
Manolotra tombony mifanaraka amin'ny zavatra ilainao amin'ny ambaratonga rehetra izahay. Ny mpitantana ny fantsonay dia manana fampidirana API 2-lalana feno handrindrana ny sanda sy ny fahafahanao, amin'ny tena izy, amin'ny fantsona 200 mahery (OTA sy tranokala misy lisitra). Isaky ny apetraka amin'ny Internet ny famandrihana dia hafarana avy hatrany izany. Ny antsipirian'ny mpitsidika, ny vidiny totaliny, ary ny fampahalalana mifandraika amin'ny famandrihana rehetra dia miafara ao amin'ny tranonkalanay foibe.
Tsy izany ihany: ny fizotran'ny fanamafisana dingana 5 tsy manam-paharoa miantoka ny fivelaran'ny famandrihana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mahazo fanaraha-maso bebe kokoa ny mpampiantrano amin'ny fanangonana angon-drakitry ny vahiny, ahazoana antoka fa voasonia ny T&C, ary manamarina karapanondro. Ny fandoavam-bola sy ny petra-bola azo antoka dia mandeha ho azy ihany koa amin'ny alàlan'ny rohy azo antoka 3D, ary ny kitapom-bolam-bola dia mitazona hatramin'ny 48 ora aorian'ny fizahana. Azonao atao ny manangana ny lisitry ny varotrao, mampitombo ny famandrihana mivantana anao ary manangona ny mombamomba anao. Inona koa, azonao atao ny manasa ny vahininao hanondro ny safidiny miditra ary mangataka fanamboarana fandriana nefa tsy mila manandratra rantsantanana akory ianao!
Serasera mandeha ho azy
Zeevou dia mamela anao hitandrina ny antoko rehetra amin'ny alàlan'ny mailaka na SMS mandritra ny dingan'ny famandrihana. Hahafahanao manamboatra modely mailaka manokana, mampifandray amin'ny teboka voatondro manokana ary manome ny fidio, ny VA ary ny mpampiasa vola hifehy an'i Zeevou. Ny mombamomba dia azo ovaina tanteraka ary azo ferana amin'ny karazana andraikitra sy fananana.
Mandrosoa - ankinina amin'i Zeevou ny fitantanan-draharahanao, avy eo mipetraha miala sasatra. Miteraha asa am-pahamendrehana amin'ny tanana na mandeha ho azy ny famoronana asa sy hetsika mahazatra. Tazomy eo an-tampon'ireo fanangonana fitoeram-bokinao isan-kerinandro, fanamarinana ny fiarovana ny entona isan-taona, ary avelao ny mpampiasa hifampizara andraikitra. Mora daholo izany miaraka amin'i Zeevou.
Fitantanana ny fanaraha-maso voadinika
Azonao atao ny mandamina ny fitantanananao ny fizahana amin'ny alàlan'ny famelana an'i Zeevou handamina sy hanamafy ny lafiny rehetra amin'ny fahatongavan'ny vahininao. Ny rafitray dia handefa torolàlana momba ny fizahana tena fotsiny raha vantany vao vita ny dingana fanamafisana 5-booking. Raha marihina fa fihaonana sy fiarahabana ny fizahana dia ho azonao antoka fa tsy handany fotoana amin'ny fiandrasana ireo vahiny mety tara ianao. Zeevou dia handefa hafatra ho azy ho an'ny mpiasa miandraikitra ny fisavana, adiny iray alohan'ny fotoana fahatanterahan'ny vahiny!
Fanaraha-maso lavitra ny fanaraha-maso ny trano
Ny algorithma mahery an'i Zeevou dia tsy vitan'ny hoe manara-maso fotsiny ny asa, fa koa ny fikarakarana tokantrano antonony amin'ny fahita matetika namboarinao. Amin'izay dia azonao antoka fa voakarakara tsara ireo vahininao maharitra, tsy misy olana amin'ny fanarahana ny fotoana nanadiovana ny ekipan'izy ireo farany. Ho azonao atao ny manatsara ny fizarana asa mandeha ho azy, manome alalana fidirana amin'ny mpiasa amin'ny fandaharam-potoana, ary manara-maso ny toerana misy azy sy ny fotoana GPS amin'ny asany raha vantany vao miditra izy ireo. Ho azonao atao aza ny manara-maso ny kalitaon'ny fanadiovana lavitra avy amin'ny mangataka sary amin'ny alàlan'ny fampiharana. Ny mpiasa an-trano sy ny mpiasa hafa dia ho afaka hanao tatitra momba ny fikojakojana asa, raha manara-maso ny asa rehetra ianao, manendry azy ireo amin'ny mpifanaraka, ary manaraka ny fandrosoana mandra-pahatongan'ny vahaolana.
Kaonty sy fitehirizana boky
Tsy mijanona eo ny majika ... Azonao atao koa ny manoratra ny karamanao sy ny fandanianao rehetra ao anatin'ny rafitray, ary kajy haingana sy mora ny fidiram-bolanao. Zeevou dia miombona amin'ny Xero hamerenana azy hatrany hatrany ny fitahirizam-bokinao. Ny fahafahana manodina ny famerenam-bola sy mitaky fametrahana vola azo antoka nefa tsy mila miala ao Zeevou, ary koa manana faktiora novokarina ho azy ary nalefa tany amin'ny vahiny dia midika fa afaka mampihena ny fotoana laninao amin'ny asa andanianao ianao ary mifantoka amin'ny tena zava-dehibe.
Avelao amin'i Zeevou izany, ary jereo ny orinasao mitombo.